गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम सिटिजन युके सार्वजनिक गरिएको छ - Complete Nepali News Portal
गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम सिटिजन युके सार्वजनिक गरिएको छ
ललितपुर, जेठ १० ।
गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बुको गीति एल्बम सिटिजन युके सार्वजनिक गरिएको छ । ललितपुरमा रहेको रेडियो बिएफबीएसमा शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको प्रमुख आतिथ्यतामा एल्बम ‘सिटिजन युके’लाई सार्वजनिक गरिएको हो ।
रेडियो बिएफबीएसमा लाइभ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. कृष्णहरि बराल, सङ्गीतकार महेश खड्का, गायक दिपक लिम्बु, गीतकार अग्निप्रसाद केदेम लिम्बु, रेडियो बिएफएसका स्टेशन म्यानेजर बिनोदध्वज खड्कालगायतले एल्बम विमोचन गरेका हुन् ।
अग्निप्रसादको एकल रचना रहेको गीतको एल्बमका सबै गीतमा दिपक लिम्बुको स्वर र महेश खड्काको सङ्गीत रहेको छ ।
एल्बममा सिटिजन यूके, कोखबाट जन्म पाउँदा, बोली बचन सुनजस्तो, यात्रा लामो घुम्तीको, तिमीले नै जिन्दगीको जस्ता पाँच गीत समावेश गरिएको छ ।
किशोर थापाको मिक्सिङ र माष्टरिङ रहेको एल्बमका गीतमा अशोक लोहारुङ राई, अमोश तामाङ, बादल लिम्बु र सबिन लिम्बुको सङ्गीत संयोजन रहेको छ ।
कार्यक्रममा गायक अग्निप्रसादको परिवार, सञ्चारकर्मी र अन्य व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।